काभ्रेको त्यो ढुङ्गा खानी : बस्ती तान्न खोज्दै, तर कोहि बोल्दैनन्, किन ? (भिडियो) – मिलिजुली खबर
हुन त धेरैलाई लाग्दो हो । अरूले ब्यवसाय गरेको, कमाएको डाहा किन गर्नु । उसको मर्जी । दुनियाँले किन टाउको दुखाउनु ? अझ पछिल्लो समय त कतिसम्म भन्ने गरेको सुनिन्छ भने ‘सक्ने भए आफुले पनि त्यस्तै काम गरे भै हाल्यो नि, किन अरूको रिस गर्नु ?’ हुन पनि हो अरूले कमाएको रिस गरेर आफ्नो बैंक खातामा पैसा त आउँदैन !
तर कयौँ त्यस्ता ब्यापार, ब्यवसाय छन् । जसले आम नागरिकसंग सरोकार राख्छ । त्यसै मध्येको एक हो काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर ४ चलालगणेशस्थानमा रहेको ढुङ्गा खानी ।
१० बर्ष भन्दा बढी बितिसक्दा यो पहाडबाट उत्पादन भएको गिट्टी धेरैको घरमा प्रयोग भएको छ । तर अबको केहि बर्षभित्रै वडा नम्बर ४ को एउटा ठूलो बस्तीका सर्वसाधारण घर छोडेर हिँड्नु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
केहि बुढापाखाहरू यो खानीको क्रियाकलाप देखेर चिन्तित र दुखित छन् । तर युवा पुस्ता बोल्न मान्दैनन् । सामान्य भन्दा सामान्य नागरिकको पनि आर्थिक हैसियत निकै माथि उठेको छ । यहि ढुङ्गा खानीकै कारण ।
चलाल गणेशस्थानका कैयौं मान्छेको आर्थिक हैसियत सुध्रिएको छ । तर बस्ती जोखिममा छ । काभ्रे जिल्लाका यस्ता कैयौं उद्योगहरु वातावरणीय मूल्यांकन अनुसार सही ढंगले चलेका छैनन् । तर प्रशासन र जनप्रतिनिधि यस्ता उद्योगहरुलाई मापदण्डभित्र ल्याएर सञ्चालन गर्न सक्ने आट गर्दैनन् । जनप्रतिनिधि र प्रशासन भन्दा ढुंगाखानी सञ्चालकहरू निकै हाबी देखिन्छन् ।
केहि मान्छेको निहीत स्वार्थका कारण एउटा बस्ती नै उठिबास लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ । अब यो रोकेर रोकिने अवस्थामा पनि छैन । रातभर पहिरो खस्छ । वरिपरिको मानिसहरूलाई बानी परिसक्यो पहिरोको आवाज सुनेर आनन्द लिने ।
तर उनी जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई भन्न सक्दैनन कि योभन्दा बढी उत्खनन् नगर्नु । आखिर किन ? यसको जवाफ कसले दिन्छ । बस्ती लडेपछि मात्रै सबैको चेत खुल्ने हो ?
काभ्रे प्र'हरीको सफलता: दु'र्घटना गरेर भागेका सवारी चालक रामेछापका शेर्पा प'क्राउ